अध्यागमन बिभागमा चरम ज्यादती, अध्यागमन अधिकारिकै कारण प्लेन नै छुटाऊन बाध्य नागरिक ! – Rhino khabar
Home/थप/अध्यागमन बिभागमा चरम ज्यादती, अध्यागमन अधिकारिकै कारण प्लेन नै छुटाऊन बाध्य नागरिक !
युगान्डाबाट बिदमा गएका लोकेन्द्र रानासंग युगान्डाको काम गर्ने भिसा लगभग ३ बर्षकै छ । नेपाल सरकारबाट श्रम अनुमति स्वीकृत पनि छ । उनी ९ बर्ष देखि युगान्डा आऊजाऊ गरिसकेका मान्छे हुन । युगान्डाको लागी नेपाल सरकार बाट श्रमका लागि मान्यता दिइएको देश भने होइन। तैपनि श्रम बन्छ, नेपालकै विमानस्थल प्रयोग गरेर आजसम्म सयौं नागरिक कामको शिलशिलामा युगाण्डा आऊनेजाने गरिसकेका छन। विधिसम्मत तरिकाले श्रम बनाएर नेपालकै एयरपोर्ट प्रयोग गरेर युगाण्डा जान खोज्दा अध्यागमनद्वारा अचानक जान मिल्दैन भनेर अनेक दुख दिइन्छ । अन्ततः उनको फ्लाइट छुट्छ र उनी आबेशमा अधिकृत संग झर्किन्छन। अध्यागमनले पासपोर्ट जफत गर्छ र सिफारिस स्वरुप कालिकास्थानस्थित अध्यागमन बिभागलाइ चिठी लेख्छ: तपसिल बमोजिमको मान्छेले अपशब्द,अभद्र व्यबहार गरेकोले आवश्यक कार्बाही गरि पाउ भनि। अनि अर्को दिन अध्यागमन बिभागमा बोलाइन्छ ।
युगान्डा अध्यागमन हुँदै आएका हाम्रा पाहुना जो अधिकांश नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन्छन, तिनिहरुलाई अध्यागमन सम्मै पुगेर स्वागत साथ भित्र्याइएको हामिले अनुभव गरीइसकेका छौं। युगान्डाका नागरिक कति शिष्ट र शालिन छन भन्ने कुरा नेपाल सरकारका गृहमन्त्रालयकै केहि कर्मचारीले पनि अनुभव गरिसक्नु भएको छ। बिकासको हिसाबले नेपाल र युगान्डा उहिं गतिका भएपनि नेपालले युगान्डाबाट सिक्न सिक्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन। तरपनि समग्र अफ्रिकालाई हेर्ने एउटै दृष्टिकोण नेपालस्थित अध्यागमन कर्मचारीले बदल्न जरुरी छ ।
त्यही अध्यागमन बाट लाखौं खर्च गरि बिना भिसा पहिलो पटक दलालको प्रलोभनमा परि सेटिङ मिलाएर यहाँ आइपुगेका र अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्दा हामी थाकिसकेका छौं। अफ्रीकामा नेपालिहरुको लागि गैर आवासिय नेपाली संघ बाहेक अरु कुनै संस्था छैनन र संस्थागत अफ्रीका भित्रका NRNA ले निस्वार्थ सेवा दिदै आएको पनि छ। तर संस्थाले सिफारिस गरेका साथीहरूलाई नेपालस्थित अध्यागमनमा अनेक दुख दिइन्छ। हुँदा हुँदा बलियो कागजात बोकेका निर्दोश साथिहरुलाइ पनि यतिसमको सास्ती? के यो मानशिक यातना होइन र? नेपास्थित अध्यागमनका कर्मचारीहरुको रवैया आखिर कहिले सम्म? कर्मचारीहरु कहिले जिम्मेवार बन्ने? अध्यागमन कर्मचारीकै कारण उनको छुटेको प्लेन र गुमेको रोजगारीको भरपाई कसले गरिदिने?
अविरल यात्रीको स्मरणमा त्योबेलाको दशैं !